Kedu ihe bụ nlekota AWS? | Omume kacha mma nlekota AWS
Okwu mmalite maka nlekota AWS
AWS, otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na-enye ọrụ igwe ojii, na-enye ọtụtụ ọrụ igwe ojii na-akpali akpali na ikpo okwu AWS. AWS S3 (Ọrụ Nchekwa Dị Mfe), EC2 (Elastic Compute Cloud), VPC (Virtual Private Cloud), Autoscaling bụ otu n'ime ọrụ ole na ole AWS nyere.
A bịa na nlekota AWS, ụdị ọrụ dị iche iche na-eme na akụrụngwa AWS. Dabere na ngwa nzukọ, ọrụ, na akụrụngwa, otu ọrụ nlekota oru nwere ike ịba uru. CloudWatch, CloudTrail, na X-ray bụ ọrụ AWS ole na ole na-enyere ndị otu aka nyochaa akụrụngwa AWS ha na igwe ojii.
Nyochaa Metrics na AWS CloudWatch
Amazon CloudWatch bụ ọrụ AWS na-enye gị ohere ịnakọta ma nyochaa metrik arụmọrụ maka akụrụngwa igwe ojii AWS gị niile na ngwa na-agba ọsọ na AWS n'ime obere pịa ole na ole. AWS na-enye metrik arụnyere n'ime nke na-enyere ndị ọrụ aka ịghọta ihe dị iche iche, ebe enwere ike ịmepụta metrik omenala site n'enyemaka nke oge EC2. Metrik ewepụtara CloudWatch enweghị ọnụ ahịa maka nkeji ise nleba anya ebe a na-ana metric nkeji nkeji. Na mgbakwunye, AWS CloudWatch na-enye metrik ụlọ ọrụ na-enyere aka nyochaa akụrụngwa, ọnụọgụ nke ikpe EC2, tọọ mkpu na ihe omume nwere mmetụta, lelee usoro okporo ụzọ, wdg.
Enwere ike nyochaa akụrụngwa AWS ozugbo site na enyemaka nke CloudWatch. Enwere ike ịnakọta ma nyochaa metrics dịnụ, nke enwere ike iji tụọ ngwa na akụrụngwa. Ngosipụta akwadoro nwere ike izipu ọkwa ma ọ bụ mee mgbanwe emebere nke ọma na akụrụngwa.
Na-arụ ọrụ na AWS CloudWatch
Amazon CloudWatch na-anakọta metrik niile wee chekwaa ya na ebe nchekwa. A na-anakọta metrik maka ọrụ AWS dị ka EC2 wee ziga ya na CloudWatch. CloudWatch metrics na-echekwa metric na ebe nchekwa ma nye onye ọrụ ohere iweghachite ọnụ ọgụgụ dabere na metrik dị. Ihe njikwa CloudWatch na-enye onye ọrụ ohere ịgbakọ data dabere na metrik wee weta otu data ahụ n'ụzọ eserese na njikwa. Amazon CloudWatch na-ahapụ onye ọrụ ka ọ hazie oti mkpu nwere ike ịgbanwe ọnọdụ igwe EC2 mgbe a na-ezute ụkpụrụ akọwapụtara. CloudWatch nwere ike ibido nyocha akpaaka na ọrụ ngosi dị mfe (SNS) na nnọchite onye ọrụ. AWS nwere mpaghara dị iche iche nwere ọtụtụ mpaghara nnweta. AWS CloudWatch enweghị ike ịchịkọta data sitere na mpaghara dị iche iche.
Nke a bụ ihe ole na ole CloudWatch na-enyere ndị otu aka nyochaa akụrụngwa AWS niile.
Ihe omume CloudWatch: Ọ na-enye usoro ihe omume usoro dị nso nke na-akọwa mgbanwe na akụrụngwa AWS. Na ọnọdụ nke ihe omume akọwapụtara, enwere ike ibugharị ha na otu ọrụ ma ọ bụ karịa. Ndị ọrụ nwekwara ike iji mmemme CloudWatch maka ịhazi ọrụ akpaghị aka nke na-akpalite onwe ya n'oge ụfọdụ site n'enyemaka nke cron ma ọ bụ ọnụego ọnụego.
CloudWatch Mkpu: Akụkụ a nke CloudWatch na-enye ndị ọrụ ohere ịtọ mkpu na metrics wee nweta ọkwa mgbe agafere ọnụ ụzọ akọwapụtara. Enwere ike iji ya mee ihe na-akpaghị aka dabere na mmemme akọwapụtagoro dị iche iche.
CloudWatch ndekọ: A na-eji CloudWatch Logs maka nlekota ndekọ, na nso ezigbo oge, maka ụkpụrụ ma ọ bụ ụkpụrụ. Site n'enyemaka nke a, ndị ọrụ nwere ike ịlele data ndekọ mbụ wee mata nsogbu isi mmalite ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Jiri CloudTrail banye nlekota oru
AWS CloudTrail bụ ọrụ igwe ojii na-edekọ oku API emere na akaụntụ ahụ wee na-ebuga faịlụ ndekọ na bọket Amazon S3. CloudTrail nwere ike soro ma ọ bụ lelee mmemme ndị ahịa niile, ya bụ, oku API a na-eme. Ọtụtụ oku API na ọrụ dị iche iche n'ime ma ọ bụ gafee mpaghara ka a na-eme site na AWS CLI ma ọ bụ njikwa njikwa AWS. CloudTrail na-edekọ oku API ndị a site n'ịmepụta faịlụ ndekọ na ibuga otu ihe ahụ na bọket S3. A na-echekwa ihe omume a n'ụdị JSON, yabụ na-adị mfe ịtụgharị uche.
AWS CloudTrail na-enye ndị otu aka ịchịa, rube isi, rụọ ọrụ na nyocha ihe egwu. Ọ nwere ike ịbanye, nyochaa, ma jigide ọrụ akaụntụ metụtara omume n'ofe akụrụngwa IT na igwe ojii. Ọ na-enye akụkọ ihe mere eme nke mmemme akaụntụ AWS nke njikwa njikwa AWS dum, AWS SDKs, ngwaọrụ akara iwu, ma ọ bụ ọrụ AWS ndị ọzọ. Ọ na-enye nghọta na-enyere aka nyochaa nchekwa, soro akụrụngwa, na nchọpụta nsogbu. Na mgbakwunye, ndị otu nwere ike soro ihe omume ndị a na-adịghị ahụkebe na akaụntụ AWS wee chekwaa onwe ha pụọ ​​​​na mmebi.
Ngwa nlekota oru na AWS X-Ray
Ngwa na ígwé ojii na-adabere n'akụkụ dị iche iche ka gburugburu na-ekesa nke ukwuu n'ofe ọrụ igwe ojii. Azụmahịa na-ewere ọnọdụ n'etiti ọtụtụ sava na ọrụ. Mgbe okwu arụmọrụ ọ bụla na-eme n'azụ, ngwaike nwere ike ịbụ onye kpatara ya, na-eme ka ọ bụrụ iwu na-enyocha ngwa.
AWS X-Ray na-enye ndị mmepe ohere imezi ngwa ndị e wuru na gburugburu ebe ekesa. Nke a na-enyere ndị mmepe aka inyocha ngwa ha wee chọpụta ihe kpatara nsogbu arụmọrụ ha nwere ike idozi ozugbo. Na mgbakwunye, ọ na-enye nghọta n'ime arịrịọ ngwụcha ruo ọgwụgwụ na-aga site na ngwa a wee gosi maapụ ihe dị n'okpuru ngwa ahụ.
X-Ray AWS nwere ike inye aka iji nyochaa ụdị ngwa abụọ ahụ na mmepe na mmepụta, site na ngwa ngwa atọ dị mfe na ngwa mgbagwoju anya nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọrụ gụnyere. Ebe AWS X-Ray na-enyere aka nyochaa ngwa ngwa na ọrụ ejikọrọ, CloudWatch Synthetics nwere ike inye aka ịmepụta canaries iji nyochaa njedebe njedebe na CloudWatch ServiceLens iji nyochaa ahụike nke ngwa ahụ.
Iji AIOps nyochaa gburugburu AWS
AIOps ọhụrụ na-esote na-enye nleba anya na nleba anya na metrik ahụike. Dashboard dị n'otu oge nke gburugburu AWS na-enyere ndị otu ọrụ aka nyochaa gburugburu ebe obibi AWS, yana usoro nleba anya dị elu na ngwakọta nke AI na ML na-eziga ọkwa tupu mmebi ọ bụla emee n'ime akụrụngwa igwe ojii. Ọ na-enye dashboard arụnyere arụnyere maka ọrụ AWS yana soro ojiji nke oriri ọrụ.